Izu okè zuru oke | Martech Zone
Izu okè zuru oke
Monday, June 1, 2009 Thursday, July 23, 2015 Douglas Karr
N'ime izu ole na ole gara aga, mụ na ụlọ ọrụ ole na ole kwurịtara okwu na-anwa itinye usoro iji merie nsonaazụ njin ọjọọ banyere ụlọ ọrụ ha, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha. Ọ enwere ike iji nọgide na-enwe a zuru okè ika afọ ndị gara aga. Ọ bụrụ na ihe ọjọọ emee, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ iji kpochapụ nsogbu ndị ahụ ma ọ bụ hichaa ha n'okpuru akwa ka mmadụ ghara ịchọta ha.
Nke a anaghị arụ ọrụ ọ bụla. Ihe ama ama nke netwọkụ mmekọrịta, saịtị nyochaa azụmahịa na ịde blọgụ enyela ndị ahịa ahụ iwe iwe nnukwu mma agha iji kụọ obi nke akara gị. Ndị ahịa na-eme mkpọtụ (oge ụfọdụ maka ezigbo ihe kpatara ya) na njikwa akara ahụ na-enwe mmetụta na-enweghị enyemaka.
Izu okè nwụrụ anwụ.
Ọ bụghịzi nhọrọ nke njikwa njikwa ma ọ bụ CMO iji jigide iguzosi ike n'ezi ihe nke ika ahụ. Ọ bụzi ọrụ dịịrị ya ndị ọrụ ọ bụla nọ na nzukọ ahụ. Agbalịla ịkụtu osisi ukwu ma ọ bụ gas anya mmiri, ma. Otu onye ọka iwu na-enweghị oke ụlọ ọrụ na-eziga kwusi ma kwusi nwere ike ịtọ Streisand utịp na ngagharị.
Companieslọ ọrụ ndị a na-ele m anya n’enweghị enyemaka, na-achọ ka m mesie ha obi ike na m ga-emeli ya idozi nsogbu ha. Ọ naghị arụ ọrụ otu ahụ. Ọ gaghị arụ ọrụ otu ahụ ọzọ. Izu okè nwụrụ anwụ. Nlekọta aha ọma, nghọta, na nnukwu ọrụ ndị ahịa bụ njikwa ihe njikwa njikwa. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị chọrọ iwu ezigbo aha, ọ na-amalite akwa ahịa.
I choo igbu a ọjọọ akụkọ dị na peeji nsonaazụ ọchụchọ ọchụchọ, ịkwesịrị ịrụsi ọrụ ike dị ka ụlọ ọrụ iji mee ụfọdụ mma akụkọ na-eme ka nsonaazụ nsonaazụ kama. Ukwuu, na-esikwu ike karị.
N'otu aka ahụ, ụbọchị ịgha ndị ahịa azụ dị ka a ga-asị na ha bụ zombies na-enweghị uche, agafeela. Ndị ahịa ugbu a na-agụ, na-ege ntị, na-atụle ma na-enyocha mkpebi ịzụta ha. Ozi ọma ahụ bụ na ndị na-azụ ahịa atụla anya izu oke ọzọ… ma ha na-atụ anya ime ihe n'eziokwu. Ọ bụrụ n’inwere peeji maka akara ngosipụta nke jupụtara na kpakpando 5, e gosipụtara ụfọdụ nyocha na ndị na-eri ihe agaghị ahụ nyocha ahụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị nwere ike ịfu ndị ahịa ma ọ bụrụ na akara gị gosipụtara zuru oke. Chaị.
Brand ezughị okè
Anyị enweghị ike ịchịkwa ozi ọ gwụla ma anyị nwere ike ibi ndụ kwekọrọ na atụmanya nke ihe anyị chọrọ ka ika anyị gosi. Anyị enweghị ike ikpuchi mmejọ anyị ọzọ, anyị ga na-emeghe banyere ha. Afọ nke ezughị okè dị n'etiti anyị - ma nwee ihe ịga nke ọma, anyị ga-emeghe ma kwuo eziokwu banyere ngwaahịa na ọrụ anyị… dị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ. Mgbe ụlọ ọrụ gị anaghị emezu ihe a tụrụ anya ya (nke ga-eme), ị ga-eme ngwa ngwa iji dozie esemokwu ahụ. M ga-agba gị ume ịzaghachi nzaghachi na mpaghara nke gị, n'agbanyeghị. Dezie okporo ụzọ ebe ị nwere igwe okwu kama ịkwụghachi ụgwọ ọrụ nke nwere ike ọ gaghị erite uru.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị nwere nsonaazụ njin ọjọọ, gbaa ndị ahịa bụ ndị mmeri nke ika gị ume ka ha kwalite gị na saịtị nke ha, profaịlụ ha, netwọkụ ha na / ma ọ bụ blọọgụ ha. Can't nweghị ike iwepu ihe ọ bụla na-adịghị mma na anymorentanetị ọzọ, mana ị nwere ike akwalite ihe dị mma.
Mgbe ụlọ ọrụ gị na -eche na atụmanya, ị ga-ahụ ya a otutu mfe jikwaa gị ika ihe n'ụzọ dị irè.
Tags: brandika na-atụ anyaezughị okèizu okè
Ahịa Ahịa Apple ọ na-ara?
Pink: Mgbe Azụmahịa Na-adịghị
Jun 1, 2009 na 2:35 AM
Ndị dị otú ahụ a oké post Doug. Enweghị m ike ikwenye gị karịa. Ndị na-ahụ maka njikwa akara agbanweela ma ọ masịrị ha ma ọ bụ na ọ masịghị ha. Ha (na anyị) ga-aga nke ọma ma daa na ike ha ịmeghe eziokwu na ngwaahịa na ọrụ ha? ezi, ọjọọ, ma ọ bụ na-enweghị mmasị.